ကောလိပ်ပညာသင်ဆုများ မည်သို့ရယူရမည်နည်း။ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
Maite Ncuesa | 25/12/2021 23:48 | အဆင့်မြှင့်တင် 25/12/2021 23:51 | ပညာသင်ဆု
တက္ကသိုလ်ပညာသင်ဆုတွေကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ တစ်ခုယူပါ။ တက္ကသိုလ်ပညာသင်ဆု အခြားမည်သည့်အတိုင်းပင်၊ အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း၏တန်ဖိုးနှင့်အတူ ၎င်းသည် ပညာရေးပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားသည် သူ၏ပန်းတိုင်ကို သတ်မှတ်ပြီး သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်ရန် လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဥ်ကို ရေးဆွဲရန် အရေးကြီးပါသည်။ Training and Studies တွင် သင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သော အခြေခံ အကြံဥာဏ်အချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးပါသည်။
1 1. မတူညီသောခေါ်ဆိုမှုများ ညှိနှိုင်းမှုများ
2 2. စာရွက်စာတမ်းများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။
3 3. သင့်အဆင့်များ တိုးတက်စေရန် လေ့လာပါ။
4 4. ပညာသင်ဆုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။
5 5. အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ချရေးရန် မှတ်စုစာအုပ်ကို အသုံးပြုပါ။
1. မတူညီသောခေါ်ဆိုမှုများ ညှိနှိုင်းမှုများ
ပညာသင်ဆုတစ်ခုစီသည် သီးခြားကျောင်းသားကိုယ်ရေးအကျဉ်းအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ခေါ်ဆိုမှုတွင် စုံလင်စွာဖော်ပြထားသည့် ပရိုဖိုင်သည် အချို့သောလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဟုဆိုသည် ။ ထို့ကြောင့်, တစ်နှစ်ပတ်လုံးခေါ်ယူသော မတူညီသောထောက်ပံ့ကြေးများသို့ သင်၏လျှောက်လွှာကို တင်သွင်းပါ။. ထုတ်ဝေမှုအသစ်တစ်ခုစီ၏ မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားသောအသိပညာကို သင်မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။ ဤအချက်အလက်ကို တရားဝင်နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းမှတစ်ဆင့် တိုင်ပင်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်လေ့လာနေသည့် တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသားများအား ဤပြဿနာအတွက် အကြံပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အပိုင်းရှိမရှိကိုလည်း သင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ပညာရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လေ့ကျင့်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် သင်သည် ပညာသင်ဆုနှင့် အကူအညီများ ကဏ္ဍကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကျောင်းသားအများစုသည် ကောလိပ်ပညာသင်ဆုရရှိရေး ရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်လိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် အခြားအတန်းဖော်များနှင့် စကားပြောဆိုနိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သင်သိသော အခြားပညာသင်ဆုလက်ခံသူများကို အကြံဉာဏ်ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။
2. စာရွက်စာတမ်းများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။
ပညာသင်ဆုအတွက် ခေါ်ဆိုမှုအသစ်တွင် အလွန်အရေးကြီးသော အချက်အလက်တစ်ပိုင်းပါရှိသည်- လျှောက်လွှာတင်ခြင်းအတွက် ပြီးဆုံးမည့်ရက်စွဲ။ ထိုအချိန်မှစ၍၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် အကူအညီများတောင်းခံရန် လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက လုပ်ငန်းစဉ်ကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အခြေအနေများ မရှိတော့ပါ။
တခါတရံ ကြိုတင်မှာကြားထားရမည့် စာရွက်စာတမ်း အများအပြားကို တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။. ထို့ကြောင့် ဤပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို နောက်ဆုံးအခိုက်အတန့်အထိ မထားခဲ့ပါနှင့်။
3. သင့်အဆင့်များ တိုးတက်စေရန် လေ့လာပါ။
ပညာရေးမှတ်တမ်းသည် ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသော စာရွက်စာတမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားသည် တိကျသော ပျမ်းမျှအဆင့်ရှိရမည်ဟူသည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားသည် ပါရဂူဘွဲ့ကို စတင်သည့်ကိစ္စတွင် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ပြီးဆုံးပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ ဒီအဆင့်မှာ သုတေသီတွေရဲ့ အလုပ်တွေကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးတွေအတွက် သင်လျှောက်ထားနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် တက္ကသိုလ်ပညာသင်ဆုရရှိရေး ရည်ရွယ်ချက်သည် ရေတိုတွင် လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်နိုင်သည့် ကွဲပြားသော လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ နေ့စဉ်လေ့လာရန် ကတိကဝတ်သည် စာမေးပွဲရမှတ်များ တိုးတက်စေရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။.
4. ပညာသင်ဆုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။
စံပြအကူအညီသည် သင့်ပရိုဖိုင်နှင့် ကိုက်ညီသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် ခေါ်ဆိုမှုအမျိုးမျိုး ရှိပါသည်။ သို့သော်၊ ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် ထုတ်ဝေထားသော ပညာသင်ဆုများအားလုံးအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီရန် လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။ ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီး ရှာဖွေမှုအကွက်ကို ကျဉ်းအောင်ပြုလုပ်ပါ။ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ထိုအကူအညီများမှတဆင့်။
5. အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ချရေးရန် မှတ်စုစာအုပ်ကို အသုံးပြုပါ။
ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် ပညာသင်ဆု တောင်းခံသည့်အချိန်မှစ၍ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထုတ်ပြန်သည့်အချိန်အထိ အချိန်ကာလတစ်ခု ကုန်ဆုံးသွားပါသည်။ သင်အောင်မြင်လိုသော ရည်မှန်းချက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်မှန်သမျှကို ရေးမှတ်ရန် မှတ်စုစာအုပ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် အပြုသဘောဆောင်ပါသည်။. ဥပမာအားဖြင့်၊ ခေါ်ဆိုမှုအသစ်တစ်ခု၏ကြေငြာချက်၊ သင်ပြင်ဆင်ရမည့်စာရွက်စာတမ်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားသည့်အလုပ် သို့မဟုတ် အခြားကိစ္စတစ်ခုခု။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ သင်လျှောက်ထားခဲ့တဲ့ ပညာသင်ဆုတွေကို ခြေရာခံဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ထို့အပြင် ဖြစ်နိုင်သောခေါ်ဆိုမှု၏ရလဒ်များကို အပျက်သဘောဆောင်သော မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ ယုံကြည်ချက် ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ အချိန်မတိုင်ခင် စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ထိုသို့သောသက်ဆိုင်ရာပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပန်းတိုင်တစ်ခုအောင်မြင်ရန် ပထမခြေလှမ်းမှာ လိုအပ်သလို အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » တက္ကသိုလ် » ပညာသင်ဆု » ကောလိပ်ပညာသင်ဆုတွေ ဘယ်လိုရလဲ။
သင်တန်းတစ်ခု အတည်ပြုပြီးပါက မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။